Marka waxaad ka soo kaban kartaa ogeysiisyada xiran ee ku jira Android | Androidsis
Sida loo soo cesho ogeysiisyada lagu lumiyey qalad, ama maya, Android
Soo celi ogeysiisyada xiran ama lumay Waxay noqon kartaa caawimaad weyn markaan si kama 'ah u noqonno, waan joojinnay ama waxaan sameynay tilmaam ku saabsan ogeysiin runtii aad noo xiiseynaysay. Iyada oo tiro badan oo barnaamijyadooda ah oo aan ku rakibnay terminaalkeenna, aad ayey u fududahay in ogaysiisyo badan faraheennu ay hal dhinac ama mid kale u maraan.
Oo sidaas darteed waxaan isku dayi doonaa inaan ku siino hab fiican oo lagu soo celiyo ogeysiisyadaas la ilaaway, lumay ama la xidhay si loo helo ogeysiiska nidaamkaas ama ogeysiis kale oo ah danahaaga. Tan awgeed waxaan isku caawin doonnaa barnaamij weyn oo lagu cusbooneysiiyay nooca 2.0. Markaa aan u nimaadno.
1 Ku rakibidda ogeysiis ku saabsan nooca 2.0
2 La shaqeynta barnaamijka
Ku rakibidda ogeysiis ku saabsan nooca 2.0
Ogeysiin la'aantu waa barnaamijka naga badbaadin doona dhibaatadaas oo noqon karta luminta fariin taas oo aan ku haysannay wax xiiso leh. Tusaalooyinka waxay noqon karaan dhowr, laakiin fariimaha nidaamka waxay noqon karaan hal tusaale. Barnaamijkan waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 2.0 Oo hadda waxay taageertaa noocyo badan oo Android ah.
Waxaan ka hadlaynaa inaad awood u leedahay inaad ku isticmaasho Android 6.0 Marshmallow ama ka sareeya. Kaliya joogi maayo taageero ballaadhan u leh qalab tiro badan, laakiin waxay keeneysaa waxyaabo dheeri ah oo ka badan soo dhaweynta si ay nooga caawiso muuqaalka soo celinta ogeysiisyada xiran.
Marka la soo koobo, hadda waxaa jira kala-soocid ogeysiisyo ah, eeg ogeysiisyadaas "ka baxsan", dib-u-u-awood iyaga, suurtagalnimada taariikhda wargelinta raadinta oo tirtir dhammaan kooxaha ogeysiisyada. Awoodda dib-u-awoodsiinta ogeysiisyada iyo tirtirka kooxahooda waxaa laga heli karaa Android 8.0 ama wixii ka sarreeya.
La shaqeynta barnaamijka
Waxa ugu horreeya ee kadis ku ah ogeysiiska ayaa ah inaan ku siineyno inaad ku hesho guddiga ogeysiiska. Tan ayaa sameysay, barnaamijka wuxuu bilaabi doonaa inuu abuuro faylalka aad u ballaaran dhammaan ogeysiisyada aad u timid inaad ka aragto boosteejadaada. Liiskan waxaa si otomaatig ah loogu nadiifin karaa iyada oo la adeegsanayo xilli gaar ah isla isticmaalaha, ama si fudud loogu sameeyo keyd daruur si loo badbaadiyo oo aan waxba loo seegin.
Iyo in liiskan liis garaysan ay ka dhigan tahay taas waan awoodi doonnaa inaan sifeyno ama raadino intaas oo dhan in aan rabno in jiffy ah. Waa sheeko xiiso leh in lagu xakameeyo ka badan liiska ogeysiisyada oo aad u ballaadhan, sidaa darteed in la muujiyo ayaa aad noogu weyn inaan helno wax kasta oo aan dooneyno.
Markaa waan dhaafnaa in la qoro mid kasta oo ka mid ah shaqooyinka ugu fiican ka socda abkan loo yaqaan Ogeysiinta:
Ka raadi ogeysiisyada qoraal kasta oo ku jira ogeysiiska. Taasi waa, labadaba magaca barnaamijka, cinwaanka ogeysiiska, waxa qoraalka ku jiri kara iyo wax ka badan.
Ka hel ogeysiisyada taariikh cayiman.
Raadi nooc ka mid ah ogeysiisyada sida emayl ama ogeysiisyada nidaamka.
U samee barnaamij loogu talagalay tirtirka otomaatigga ah ee maalinlaha, toddobaadlaha iyo bil kasta ee ogeysiisyada oo dhan.
Samee nuqul ogeysiisyadaada ah.
Mawduuc madow si looga baqo nidaamka intiisa kale.
Laga soo bilaabo Android 8 waxaan sameyn karnaa:
Ver ogeysiisyada "ka baxsan" gacantayada nafteena
Dhammaan astaamaha, marka laga reebo qoraallada la caddeeyay ee ogeysiisyada, waxaan diiradda saareynaa kartida lagu raadin karo ogeysiisyada taariikh cayiman ama nooca ogeysiisyada. Tusaale ahaan, waxaan raadin karnaa dhammaan e-mayllada la soo helo hal maalin, oo sidaas ayaan ku iloobi karnaa inta ka hartay ogeysiisyada. Awoodda ay ku sifeyn karto waxa aynaan u baahnayn waa mid ka mid ah dalabyada ugu waaweyn ee ay bixiso haddii aan barbar dhigno barnaamijyada kale ee noocaas ah.
Y Ogeysiinta waa barnaamij gebi ahaanba bilaash ah taasi kaliya waxay leedahay hal lacag bixin, laakiin kuwa doonaya inay ku abaalmariyaan shaqada weyn ee uu qabtay horumariyaha. Xaaladdan oo kale Nasah Apps. App kuu oggolaanaya inaad ka soo kabato ogeysiisyo lumay ama shil ahaan u xirmay oo sidaas ku hela waxaad u baahan tahay. Waxaad ku haysaa nooca 2.0 wixii hadda ka dambeeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo soo cesho ogeysiisyada lagu lumiyey qalad, ama maya, Android
Night Swipe Night waa xiisaha xiisaha leh si looga badbaado aakhiro iyo, si kadis ah, u shukaansado